Isikhathi eside igcina izinga lokushisa 37
Ochwepheshe bathi uma izinga lokushisa kugcinwa 37 esingaphezu kwesonto, kuyafaneleka ngacabanga. Kuyadingeka ukuthola ukuthi sibangelwa umzimba asabele kunjalo, ziyini izizathu. Yiqiniso, ekugcineni okuyikona kungenziwa kuphela ube uchwepheshe, kodwa ngisho udokotela kungavela lelungiselelwe. Vele lalela imizwa yabo futhi ukulandela lokho izimpawu ephelezelwa imfiva.
Uma izinga lokushisa kugcinwa isikhathi eside 37, ngaphezu, umuntu uyakhathala ngokushesha baba bengenandaba, futhi umzimba kubonakala ukotini, singakhuluma SARS kwenzeka. Umkhuhlane ngokuvamile kubangela ukukhwehlela, amakhala yisisu, umphimbo ukungakhululeki. Kulokhu-ke kubalulekile ukuhlinzeka isiguli umbhede efudumele futhi ukuvikela kusuka izenzo engadingekile. Kufanele unike njalo iziphuzo efudumele, ngoba umzimba udinga amanzi kabanzi bese uthatha amavithamini. Lapho Izindlela zokwelapha yasendlini abanamandla, futhi namanje igcina lokushisa 37, uzokwazi ukusiza imithi kuphela, ukusetshenziswa okuyinto ebekiwe nguchwepheshe.
Ngokuvamile isifo emathunjini kunomthelela ukunyuka kwezinga lokushisa. Lapho lesi siguli azizwa sokuyaluza lapho esiswini, okuyinto kuhambisana sohudo.
Kuyaziwa ukuthi isimiso sezinzwa kunemtselela umsebenzi eziningi izibilini jikelele nenhlalakahle yomuntu. Uma kukhona iziyaluyalu ezingokwengqondo, izinga lokushisa kugcinwa isikhathi eside. Isiguli iba nolaka, ukukhathazeka, kungase ujike ngaphakathi. Kukhona isimo esicishe sibe ukucindezeleka zivame ukubangela ukuqhuma kwentukuthelo ukuthuthukiswa izifo eziningi.
Uma izinga lokushisa kugcinwa njalo 37, bese kuba khona ithuba ukutheleleka engajwayelekile yethu isifo esifundeni esibizwa imfiva ejwayelekile. akukho ukumesaba, kodwa kumelwe senze ngokushesha. Phela, ukuze ukungabaza mayelana idatha noma, kunalokho, ukuqinisekisa umphumela can udokotela abanekhono kuphela.
Kwesinye isikhathi lokhu uphawu kubonisa khona hypothermia abalufundile noma azalwa naso, kodwa qiniseka lokhu kungenzeka kuphela ngemuva kokuphumelela uvivinyo. Amagciwane, amagciwane athile kanye nesikhunta kungasiza nasekunciphiseni ukuqinisekisa ukuthi izinga lokushisa kugcinwa isikhathi eside 37. La Amagciwane kukhona causative ejenti izifo eziningi, kuhlanganise ezibangelwa amagciwane kanye ukuthi adluliswa ngokuthintana ngocansi (isib ugcunsula, noma i-HIV). Ngokuvamile sofuba ifomu esicashile esiboniswe ngu imfiva.
Uma izinga lokushisa eliyifa kuyinto 37 futhi kunzima ukuceka antipyretics, lokhu kungase kube uphawu lokungabi ngisho nokugula esabekayo njengesifo somdlavuza. Lapha kahle kubalulekile. Uma uhlobo abulalayo kuwuphawu lwesimila itholwa ngesikhathi, amathuba okuthi yokwelashwa okuphumelelayo.
Uma isimo sempilo akashintshi kukho okubi, khona-ke akukho okumele ukhathazeke ngakho, ngoba lokhu lokushisa, abanye abantu bangahlala unomphela futhi sivamile emzimbeni. Kodwa ngisho khona yisiphi isifo ngokushesha ukuthatha antipyretics amaphilisi akuzona kudingekile, njengoba umzimba oqinile lingashukumisela degree ngokuphepha. A ukunyuka kwezinga lokushisa lisho ukulawula ukutheleleka asebenzayo.
Futhi ekugcineni, kuhle ukuthi uzinake wena ukuthi uma umuntu wesifazane igcina lokushisa 37, kungaba imbangela sina ngokujabula. Ngokuvamile ngenyanga yokuqala yokukhulelwa lokushisa lomzimba kancane yanda, futhi abanye aqhubeka ethemini. Khona-ke kufanele sihlale impilo yakho bese uqinisekisa ukuthi ukubeka uchwepheshe aziwa wacosha eziyinkimbinkimbi amavithamini ukuthi ukuqinisa amasosha omzimba.
Ngo Emzamweni wokuqinisa umzimba wonke ukweluleka ukuvivinya umzimba njalo nokudla ukudla okunomsoco, bese umzimba wakho ngeke nje ube nempilo enhle, kodwa ukuma okukhulu.
Ukuntuleka kokukhulumisana vitamin B12 - izimpawu e abadala, izimbangela kanye nezici ukwelashwa
Umlobi waseMelika uLincoln Child: biography, izincwadi ezinhle kanye nokubuyekezwa